Disney နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Galaxy S9/S9+ မှာ “Incredible” AR emoji တွေထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ Samsung – AsiaApps
Disney နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Galaxy S9/S9+ မှာ “Incredible” AR emoji တွေထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ Samsung
May 25, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Disney နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Galaxy S9/S9+ မှာ “Incredible” AR emoji တွေထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ Samsung
90 born တွေ၊ 2k Born တွေရဲ့ ငယ်ဘဝကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ “Incredibles” ထဲက ဇာတ်ကောင်လေးတွေကိုတော့ Samsung ဟာသူ့ရဲ့ Galaxy S9/S9+ တွေမှာ AR emoji အဖြစ်အသက်သွင်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Disney နဲ့ပူးပေါင်းပြီး အခုလိုအသက်သွင်းထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကို Samsung တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ ကိုယ်တိုင်က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲ တရားဝင်ကြေညာလိုက်တာပါ။ Incredible ဇာတ်ကောင် emoji တွေဟာ Micky Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck အစရှိတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့နောက်မှ ပေါ်လာခဲ့တဲ့ emoji တွေဖြစ်ပါတယ်။ (AR emoji အတွက် Samsung နဲ့ Disney ပူးပေါင်းတာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လို့ဆိုရမှာပါ။)
Mr. Incredible, Elastigirl, Violet, Dash, Jack-Jack တို့အပါအဝင် Mr.Incredible တို့မိသားစုရဲ့ မိတ်ဆွေ Superhero တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Super Frozone ကိုပါ S9/S9+ ရဲ့ AR emoji အဖြစ်အသက်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Emoji တွေပြောင်မြောက်လှတဲ့ လက်ရာတွေကိုတော့ အောက်က ဗီဒီယိုမှာပဲ ရှိုးလိုက်ပါတော့…
Galaxy S9/S9+ user တွေအနေနဲ့ Incredible AR emoji လေးတွေကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Camera app ထဲကိုဝင်ပြီး AR emoji mode ကိုသွားရပါမယ်။ ပြီးရင်ညာဘက် အပေါင်း သင်္ကေတလေးကို နှိပ်ပြီး Galaxly App Store ကနေ “Incredible” emoji ကိုယူလိုက်ရုံပါပဲ။
စကားမစပ် “Incredibles 2” က ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာရုံတင်တော့မယ်နော်… အချိန်ကာလ ၁၄ နှစ်အထိကြာမြင့်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ငယ်ချစ်ဉီးတစ်ယောက်ကို ပြန်တွေ့ရသလို ခံစားမိမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ Brad Bird ကပဲဆက်လက်ရိုက်ကူးထားတာကြောင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်က “The Incredibles” ရဲ့အရသာ၊ အငွေ့အသက်တွေပါဝင်နေဉီးမှာတော့ သေချာပါတယ်။ အားလုံးသွားကြည့်နိုင်ဖို့ လမ်းကြုံရင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. ?)
Android, AR emoji, Samsung
၂၀၁၇ တုန်းက ဘက်ထရီလဲခဲ့တဲ့ iPhone အသုံးပြု သူတွေကို Apple မှ ငွေပြန်အမ်းမည်
ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ စတင်မိတ်ဆက်မယ့် Vivo Apex ရဲ့ All-display နဲ့ pop-up camera